Shuruudaha laga rabo musharaxiinta Madaxweynaha oo la shaaciyay
Updated About:291 days ago 1
Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay shuruudaha laga doonayo musharaxa u tartamaya jagada madaxtinimada oo isugu jira kuwo ku xusan dastuurka iyo qaar ay dejiyeen guddiga doorashada.
Prof Jawaari wuxuu sheegay in shuruudaha laga rabo madaxweynaha ay yihiin kuwa ku cad dastuurka oo kala ah;
Qodobka 88aad (ee dastuurka cusub) . Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada:
Waxaa loo dooran karaa xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Muwaaddin kasta oo:
(a) Muwaadin Soomaali, Muslim ah;
(b) Da’adiisu aanay ka yarayn afartan (40) sano;
(c) Leh aqoon ama waayo’aragnimo u qalanta xilkaas;
(d) Dhimirkiisu dhan yahay;
(e) Gelin denbi culus oo ay maxkamadi xukuntay.
Dhanka kale Afhayeenka baarlamaanka wuxuu sheegay in doorashada madaxweynaha ay noqon doonto cod qarsoodi ah, sida ku xusan qodobka 89aad ee dastuurka cusub oo sheegaya “Codeynta doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka waa qarsoodi;“.
Wuxuu sheegay sababta doorashada madaxweynaha looga dhigay qarsoodiga ay tahay in aan xildhibaana laga dareemin in uu cid gaar ah ama xisbi gaar ah raacsan yahay isla markaana loo ilaaliyo muunada xafiiska madaxweynaha oo ah halka hogaaminta dalku ka socoto. Waxaa doorashadaasi la mid ah mida xafiiska afhayeenka baarlamaanka oo itaduna qarsoodi ku dhacday.
“Musharaxa ku guuleysta 184 cod wareega koowaad ee doorashada ayaa noqon doona Madaxweynaha Soomaaliya, haddiise la waayo waxay noqon doontaa in wareegga labaad loo gudbo iyadoo la qaadanayo afarta musharax ee ugu codadka badan” ayuu sii raaciyey Prof Jawaari oo ka hadlay qaabka ay codeynta u dhacayso.
Afhayeenka baarlamaanka wuxuu intaa ku daray in cid kasta ay xaq u leedahay inay isa sharaxdo isagoo sidoo kale tilmaamay in waxa lagu kala bixi doono codka baarlamaanka.
farhan ahmed taar says:	September 1, 2012 at 9:38 am	in uusan diktaatori ahayn iyo qabiiliiste sharuuda ha lagu daro madaxweynaha hadii kale qaxaay wey taagan tahay
Booliska Kenya oo dilay nin argagixiso ah